Malunga nathi -I-Shandong GOJON Precision Tech. Co., Ltd ..
Shandong GOJON Ukuchaneka kweTekhnoloji. Co., Ltd. ibekwe kwi-National High-zobugcisa kwiSithili soPhuhliso, Qingdao isixeko, China, ukonwabela ukuthuthwa lula kwaye kuphuhliswa kunye eziluncedo geographical ezizodwa enikwe ngendalo.
Njengomenzi omnye wobuchwephesha kuThuthu lwefektri yokuhambisa, i-Facer yokuLaminetha i-Smart line, iNkqubo yoLawulo lweMveliso kunye neCarton yokwenza izixhobo zebhokisi, njl. amashishini ekhaya nakwamanye amazwe. I-GOJON idibanisa i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa, iindlela zolawulo lwangoku kunye neengcinga zokubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo kunye nezinzileyo, isisombululo esipheleleyo sokupakisha kunye nezixhobo ezinxulumene noko. I-GOJON izinikele ekuboneleleni ngesisombululo se-turnkey ngeemveliso ezigqwesileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo yamashishini amaninzi ukwenza ixabiso kunye nenzuzo.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava, iGoJON iseke ubudlelwane obulungileyo nobuzinzileyo kunye namaziko ophando lwenzululwazi kunye neekholeji zesayensi, kwaye ihlala izama ukuphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokwenza ukuba ulungelelwaniso lwemveliso luzalisekise uninzi lweemveliso ezizinzileyo nezikrelekrele.
Ngomgangatho obalaseleyo weemveliso, uthungelwano olugqibeleleyo lokuthengisa kunye nokugqwesa phambi kwenkonzo yokuthengisa, iinkonzo zentengiso kunye neenkonzo zokuthengisa emva kokuthengisa, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe amaninzi afana neJamani, i-Itali, iSpain, iGrisi, iRussia, iBelarus eJapan, iThailand kunye I-India njlnjl kwaye iphumelele indumiso ephezulu yabathengi.
I-GOJON ikholelwa ekubeni inkanuko ifezekisa iphupha kunye nephupha lenza ummangaliso, kwaye iyakuhlala inamathele kushishino lwe-sprite "yokubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo efanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo". Inkampani ilindele ukuba ikhule kunye nabathengi, kwaye yenze impumelelo, inethemba lokuba nethuba lokusebenzisana ixesha elide kwixa elizayo.
Inkqubo yokuhambisa imveliso yefektri iphela
Iglu ngokuzenzekelayo kunye nefolda, umatshini othungayo
Uvavanyo loMgangatho oZenzekelayo kunye nomatshini wokuprinta wekhowudi weQR
Okunye izixhobo ibhokisi ibhokisi abangabancedani
Ukuthanda kunye noMbono
Ukumema ukuba Ujoyine umzi okrelekrele.
Ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo efanelekileyo kwixabiso elifanelekileyo.
Yasekwa ngo-2008, iminyaka eli-13 yamava, ixabiso lonyaka lokuthumela ngaphandle kwezigidi ezi-2 zeedola zaseMelika, amazwe aphambili athumela ngaphandle, iJamani, i-Itali, iSpain, iGrisi, iRussia, iBelarus, iThailand, i-Indiya namanye amazwe nakwimimandla engaphezulu kwe-10.
Inqwelo yokuhambisa, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Ifolda yephepha le-A3, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ibhanki ye-Erp,